ထီးချိုင့်တိုက်ပွဲမှာ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် ခုနှစ်ဦး ကျဆုံး…. – Alanzayar
ထီးချိုင့်တိုက်ပွဲမှာ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် ခုနှစ်ဦး ကျဆုံး….
ထီးချိုင့်တိုက်ပွဲမှာ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် ခုနှစ်ဦး ကျဆုံး
စစ်ကိုင်း၊ ဇန်နဝါရီ ၁၉စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ကသာခရိုင်၊ ထီးချိုင့်မြို့နယ်၊ ကျွန်းပင်သာကျေးရွာအနီးမှာ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ-SAC တပ်တွေနဲ့
ဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲမှာ ထီးချိုင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ထီးဖြူတပ်ဖွဲ့ရဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင် ခုနှစ်ဦး ကျဆုံးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်နေ့က ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ စစ်ကြောင်းချီနေစဉ် ကျွန်းပင်သာကျေးရွာအနီးမှာ ကင်းပုန်းဝပ်နေတဲ့ SAC တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် ခုနှစ်ဦး ကျဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကျဆုံးခဲ့တဲ့ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ အလောင်းတွေကို အရိုးတောင်အနီးတဝိုက်မှာ ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။အင်အား ၈၀ ခန့်ရှိတဲ့ SAC တပ်တွေက ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်-ထီးဖြူရဲ့ တပ်စခန်းနေရာကို ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်နေ့မှာ ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီး
ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်နေ့နဲ့ ၁၃ ရက်နေ့တို့မှာ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်နေ့မှာ SAC တပ်တွေက မရသိမ်ကျေးရွာအခြေစိုက် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်-ထီးဖြူရဲ့ စခန်းကို တိုက်လေယာဉ်နှစ်စီးနဲ့ ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ပြီး လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခဲ့တာကြောင့် စခန်းကို စွန့်ခွာခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဖတ်ရှု့အားပေးကြသော ပရိသတ်ကြီး တစ်ဉီးချင်း တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းအား ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါသည်။ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းတို့ဖြင့် ပြည့်စုံကာ မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ လိုလားတောင့်တသော နေ့ရက်များ အမြန်ရောက်ရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။မြန်မာပြည်ကြီးလည်းရွှင်လန်း ချမ်းမြေ့ပါစေဗျ။ပြည်သူများအားလုံးပဲ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။crd
ထီးခြိုငျ့တိုကျပှဲမှာ ပွညျသူ့ကာကှယျရေးတပျဖှဲ့ဝငျ ခုနှဈဦး ကဆြုံး
စဈကိုငျး၊ ဇနျနဝါရီ ၁၉စဈကိုငျးတိုငျး၊ ကသာခရိုငျ၊ ထီးခြိုငျ့မွို့နယျ၊ ကြှနျးပငျသာကြေးရှာအနီးမှာ နိုငျငံတျောစီမံအုပျခြုပျရေးကောငျစီ-SAC တပျတှနေဲ့ဖွဈပှားတဲ့တိုကျပှဲမှာ ထီးခြိုငျ့ပွညျသူ့ကာကှယျရေးတပျဖှဲ့ဖွဈတဲ့ ထီးဖွူတပျဖှဲ့ရဲ့ တပျဖှဲ့ဝငျ ခုနှဈဦး ကဆြုံးခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ ဇနျနဝါရီ ၁၂ ရကျနကေ့ ပွညျသူ့ကာကှယျရေးတပျဖှဲ့ဝငျတှေ စဈကွောငျးခြီနစေဉျ ကြှနျးပငျသာကြေးရှာအနီးမှာ ကငျးပုနျးဝပျနတေဲ့ SAC တပျဖှဲ့ဝငျတှနေဲ့ တိုကျပှဲဖွဈပှားခဲ့တာဖွဈပွီး ပွညျသူ့ကာကှယျရေးတပျဖှဲ့ဝငျ ခုနှဈဦး ကဆြုံးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ကဆြုံးခဲ့တဲ့ ပွညျသူ့ကာကှယျရေးတပျဖှဲ့ဝငျတှရေဲ့ အလောငျးတှကေို အရိုးတောငျအနီးတဝိုကျမှာ ပွနျလညျတှရှေိ့ခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။အငျအား ၈၀ ခနျ့ရှိတဲ့ SAC တပျတှကေ ပွညျသူ့ကာကှယျရေးတပျ-ထီးဖွူရဲ့ တပျစခနျးနရောကို ဇနျနဝါရီ ၁၁ ရကျနမှေ့ာ ရောကျရှိလာတာဖွဈပွီး
ဇနျနဝါရီ ၁၂ ရကျနနေဲ့ ၁၃ ရကျနတေို့မှာ တိုကျပှဲတှေ ဖွဈပှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ဇနျနဝါရီ ၁၃ ရကျနမှေ့ာ SAC တပျတှကေ မရသိမျကြေးရှာအခွစေိုကျ ပွညျသူ့ကာကှယျရေးတပျ-ထီးဖွူရဲ့ စခနျးကို တိုကျလယောဉျနှဈစီးနဲ့ ဗုံးကွဲတိုကျခိုကျပွီး လကျနကျကွီးတှနေဲ့ပဈခဲ့တာကွောငျ့ စခနျးကို စှနျ့ခှာခဲ့ရတယျလို့ သိရပါတယျ။
ဖတျရှု့အားပေးကွသော ပရိသတျကွီး တဈဉီးခငျြး တဈယောကျခငျြးစီတိုငျးအား ကြေးဇူး အထူးတငျရှိပါသညျ။ စိတျ၏ခမျြးသာခွငျး ကိုယျ၏ကနျြးမာခွငျးတို့ဖွငျ့ ပွညျ့စုံကာ မွနျမာပွညျသူပွညျသားမြား လိုလားတောငျ့တသော နရေ့ကျမြား အမွနျရောကျရှိပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစေ။မွနျမာပွညျကွီးလညျးရှငျလနျး ခမျြးမွပေ့ါစဗြေ။ပွညျသူမြားအားလုံးပဲ ရှငျလနျးခမျြးမွကွေ့ပါစလေို့ ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။crd
Previous Article ၂၀/၁/၂၀၂၂, မနက်ခင်းသတင်းထူးများ
Next Article မနေ့ညက ကုလအစည်းအဝေးမှာ အားရစရာကောင်းခဲ့တဲ့ နိုင်ငံကြီးများ၏ တင်ပြချက်အချို့…SeeMore